China Aluminium-aka kpara (AV-T78) emepụta na suppliers | Aviva
Aluminium-aka kpara (AV-T78)
4.Hand-kpara eriri oche (Olefin Size 15mm)
Oche: 47 * 61 * 88CM
Nkwakọ ngwaahịa: Ntughari
Uru ị na-ahọrọ akụrụngwa nke ejiri eriri kpara
Ngwongwo eji eriri akpa nwere ike ịbụ nhọrọ dị mma maka ndị na-achọ ihe ha nwere ike ịhapụ n'èzí n'afọ niile. Nke ahụ bụ n'ihi na eriri a kpara akpa na-eguzogide ọgwụ n'ụdị ihu igwe ọ bụla gụnyere oke ifufe na mmiri ozuzo.
Uru ọzọ nke akụrụngwa eriri dị na ihu igwe bụ na ọ naghị adị mfe mgbe ekpughere ya n'anwụ. Ihe a nwere polypropylene nke na-enye nchebe okike pụọ na anwụ na-ada tinyere ike agbakwunyere. Ndị nwe ụlọ nwere ike ịhapụ arịa ụlọ n'èzí na patio site na oge anọ ọ bụla ma ọ bụrụ na-ịchọrọ na-enweghị nchegbu gbasara mmebi ihu igwe. N'ezie, ọ dị mma mgbe niile ịchekwa ma ọ bụ kpuchie arịa ụlọ mgbe ị na-atụ anya ọnọdụ ihu igwe siri ike.
Anyị na-eche maka itinye oche oche anyị a kpara akpa setịpụrụ ebe niile. A na-eji oche aluminom rụọ oche ọ bụla, wee nwee ogwe aka kpara abụọ maka ihu ikuku na-enyekwa aka mee ka ị dị jụụ mgbe ihu igwe na-ekpo ọkụ. Oche ndị a bịarutere na-ezukọta, yabụ ị nwere ike ịtọlite ​​ma nwee ihu igwe ọkụ karịa n'oge.
ỌM WM W WMENAKA mara mma
Uwe a kpara akpa na-enye ọdịdị dị nro dị nro karịa ụfọdụ ụdị arịa ụlọ ndị ọzọ dị ka nchara ma ọ bụ aluminom. Nke a nwere ike ime ka patio ma ọ bụ ebe ọzọ dị n'èzí yie ndị ọbịa ọbịa. Gbakwunye obere blanket ma ọ bụ ịtụ ohiri isi na-eme ka ọ dị ka ọ na-adọrọ adọrọ dị ka arịa ụlọ dị n'ime ụlọ ma kwesịrị ime ka ndị ọbịa nọrọ n'ụlọ. Oche Palisades ọhụrụ ahụ (nke dị n'okpuru ebe a) gosipụtara etu esi eji eriri igwe rụọ ọrụ nwere ike ịdịkwuo oke ma nwee nkasi obi.
Nke gara aga: Aluminium-aka kpara (AV-T76)
Osote: Aluminom-aka kpara Bistro Set (AV-T103)
Aluminom-aka kpara Bistro Set (AV-T103)
Aluminium-aka kpara (AV-T16)
Aluminom-aka kpara (AV-T18)